माओबादी केन्द्र -एमालेको एकताको लागि यस्तो छ भागबण्डा » खबरहरुको एउटै केन्द्र
माओबादी केन्द्र -एमालेको एकताको लागि यस्तो छ भागबण्डा
बिहीबार, जेष्ठ ३, २०७५ १३:४३ मा प्रकाशित !
काठमाडौं, ३ जेठ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले सम्भवत आज पार्टी एकिकरणको घोषणा गर्दैछन् । चुनावी गठबन्धनका रुपमा अघि बढेको नेकपा एमाले तथा माओवादी केन्द्रले अन्तत पार्टी नै एक बनाउने भन्दै निर्वाचनमा होमिएका थिए ।
बिहीबार बिहान वाम एकता संयोजन समितिले औपचारिक रुपमा एकताको घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ । यस अघि दुई पार्टीका अध्यक्षहरुको वुधवार एक्ला एक्लै भेटघाट र छलफल भएको थियो । दुबै दलका तर्फबाट पार्टी एकताको प्रस्ताव पेस गरी पारित भएपछि औपचारिक रुपमा निर्वाचन आयोगलाई पार्टी एकीकरण भएको जानकारी दिने तयारी दलहरुको छ ।
मदन आश्रित स्मृति दिवसका अवसर पारेर एकता घोषणा गर्ने दुवै दलका नेताहरुले बताएका छन् ।
यसैबीच पार्टी एकताको विषयमा छलफल गर्नका लागि एमालेले बिहीबार बिहान ११ बजे देखि आकस्मिक बैठकमा छ । एमालेले एकतालाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा छलफलका लागि बुधवार नै आकस्मिक वैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो । आज नै माओवादी केन्द्रको पनि बैठक बस्दै छ । सम्भवत यो दुवै पार्टीको अब अन्तिम बैठक हुनेछ । बैठकपछि एमालेले आफ्नो केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।
त्यस्तै पार्टीका सिद्धान्त मार्क्सवाद र लेनिनवाद हुनेछ भने जनताको बहुदलीय जनवाद ९जबज० र माओवादलाई थाँती राखिएको छ । जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादलाई एउटै विन्दुमा समेट्न जनताको जनवाद राख्ने गरी सहमति जुटेको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: मंगलबार मेक्सिकोमा मारिए पत्रकार
NEXT POST Next post: पुलिस क्लबको पोल्टामा सभामुख कप
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बिहीबार, जेष्ठ ३, २०७५ १३:४३
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बिहीबार, जेष्ठ ३, २०७५ १३:४३
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बिहीबार, जेष्ठ ३, २०७५ १३:४३
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बिहीबार, जेष्ठ ३, २०७५ १३:४३
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बिहीबार, जेष्ठ ३, २०७५ १३:४३